Track 9: Insomniac — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxaan la qaadan qaadan
No hoos gaabis aan gon’ guul
No hoos gaabis aan gon 'guuleysan
No hoos inaynu naqaan isaga
Verse 2: (Andy Mineo)
Okay okay okay waxaan aad u hesho
Waa maxay hal dhibic ka ciyaaro ciyaarta haddii aadan ku guuleysan
Waxaan marna ma ku candhuufeen udgoon iyo toban
Waxaan ugu baaqayaa in hadiyad si aad u ogaato aan isdhaafsi keen
Y'all ku nool sida daqiiqo waa la koobi karayn
Haddii waqti ma aha lacag ka dibna sababta aad jilaafada si ay u qaataan
Ugu dambeyntii helay gabar aan ahayn in iyada phone waqtiga oo dhan si aad u ogaato waxaan lahaa si ay u wac
Oh my Bal muu Ilaah
Taasi ma aha wax caadi ah gabar ku jirin in ay cajiib ah
Waxaan isku dayayaa si ay ula dagaalamaan Jidka
Y'all dagaalka doonayaa in aan qaybta comment
Anigu ma heli waxay dawg, sida aabayaasha garaaca dhintay Ma ka qayb qaataan
Oo waxay ku yidhaahdeen marnaba waxba ku noqon lahaa laakiin waxaan qabaa weli waan soo baxay laga cabsado
Waxaan ma aha galay hadlaya Waxaan kaliya aad u sameeyeen
Waxay doonayaa inaan aad u hesho shaqo ama doonayaa heli qori?
Waxay rabaan in ay helaan beesho ah oo aad la gubo soo baxay aniga oo kale ah ee qorraxda
Wow, Waxaan qabaa in ay ku noo
Ha seexan xaaqin in ay hurdo la'aan
Y'all xumad walwalsan markuu iyagii Jordans dhibic
Laakiinse idinku ma walaac xumad waxa jidhkaaga ma?
Christian • December 30, 2014 at 2:23 pm • Reply
waxaad sharixi kartaa fariin ka dambeeya song fadlan?
xxx • February 9, 2017 at 4:51 pm • Reply
ա hoah blog this іs i jacayl cajiib ah st ս dhimanayaan poѕts aad.
Joog shaqada wanaagsan ee! aad xaqiiqsato, peгsons badan ayaa raadinaya аround wixii macluumaad ah ee this, yo ᥙ, gargaarana aan laga yaabaa ց г atly ᥱ.
fuck • July 6, 2017 at 6:57 waxaan ahay • Reply
post weyn Pretty. Waxaan si fudud ku turunturoodeen, marka aad blog iyo doonayay in la xuso in aan ku ahaantii riyaaqay eegay hareeraha posts weblog aad.
Si kastaba ha ahaatee waxaan doonaa in la jaraaidka on your rss
quudin iyo Waxaan rajeynayaa mar kale waxaad u soo qori ugu dhakhsaha badan!